Otu esi achọta nọmba ICQ gị
N'oge a, ezigbo onye ozi ICQ ahụ na-aghọwanye onye ọzọ. Isi ihe kpatara nke a bụ ọtụtụ ntinye ọhụrụ nke metụtara nchekwa, ndụ, emoticons na ọtụtụ ndị ọzọ. Taa, onye ọ bụla nke oge a nke ICQ agaghị enwe oke ịmara nọmba nke ya (ebe a na-akpọ ya UIN).
Akwụkwọ ozi m na-egbuke na akara ngosi ICQ - anyị na-edozi nsogbu ahụ
N'agbanyeghi na na nsụgharị ọhụrụ nke ICQ enwere ọtụtụ ntinye obi ụtọ, ndị ICQ mmepe anaghị achịkwa iji wepụ "mmehie" ochie. Otu n'ime ha bụ usoro ihe ọmụma nke na-enweghị nghọta banyere nsogbu ọ bụla na mbipute nwụnye nke onye ozi ahụ. Na-emekarị, onye ọrụ ahụ na-ahụ akwụkwọ ozi na-agba ọkụ m na akara ngosi ICQ na enweghị ike ime ihe ọ bụla banyere ya.
Ọ bụ ezie na onye ozi ICQ aghọwo ezigbo ewu ewu, mgbe ụfọdụ, enwere ikpe mgbe onye ọrụ chọrọ ihichapụ akaụntụ ya. Nke a bụ tumadi n'ihi mmezighị emezi ndị mmepe na-eme mgbe ha na-ekepụta mbipụta ICQ ọhụrụ. Ụfọdụ na-adịghị amasị mmasị ọhụrụ ma ọ bụ nuances ndị ọzọ nke onye ozi a.
Ihe jikọrọ ozi ahụ "Onye ọrụ ICQ gị bụ oge ochie na enweghị nchebe"
N'ọnọdụ ụfọdụ, mgbe ị na-amalite ICQ, onye ọrụ nwere ike ịhụ na ihuenyo ya ozi na ọdịnaya ndị a: "Onye ọrụ ICQ gị bụ oge ochie ma ọ bụ enweghị nchebe." Ihe kpatara nbata ozi dị otú ahụ bụ naanị otu - mbipụta nke ICQ. Ozi a na-egosi na ọ bụ ugbu a adịghị mma iji ụdị arụnyere na kọmputa gị.
Nsogbu na ọrụ nke ICQ
Na agbanyeghi otú otu ama akụkọ banyere otu n'ime ndị ozi kachasị amara na Russia bụ, nke a anaghị egbochi eziokwu ahụ bụ na nke a bụ usoro ihe omume, ya mere ọdịda dị iche iche. N'ezie, ọ dị mkpa ka a gwa gị nsogbu, ọ ga-akacha mma ozugbo na n'egbughị oge. ICQ Failure ICQ bụ onye ozi dị mfe nke nwere ụlọ ọrụ iwu na-adịghị agafe agafe.
Esi edebanye aha na ICQ
Ugbu a onye ozi ICQ maara nke ọma na-enwe ọganihu ọhụrụ. O nwere ihe ndị ọzọ na njirimara na-adọrọ mmasị, gụnyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọchị ọchị na akwụkwọ mmado, nkata ndụ na ọtụtụ ndị ọzọ. O kwesịkwara icheta na ndị mmepe na-elebara nchebe anya. Naanị eziokwu na ugbu a na ICQ ihe niile gosipụtara site na ozi SMS, bụrịrị okwu nke nkwanye ùgwù.
Ntughachite nkwupute na ICQ - ntuziaka zuru ezu
Mgbe ụfọdụ, e nwere ikpe mgbe onye ọrụ chọrọ iji weghachite paswọọdụ ya na ICQ. Ọtụtụ mgbe, ọnọdụ a na-eme mgbe onye ọrụ chefuuru paswọọdụ site na ICQ, dịka ọmụmaatụ, n'ihi eziokwu na ọ abanyeghị na onye ozi a ozugbo. Ihe ọ bụla kpatara mkpa iji weghachite paswọọdụ site na ICQ, enwere otu ntụziaka iji rụzuo ọrụ a.
Ebee ka akụkọ ihe mere eme nke ICQ
Ngwá ọrụ mmekọrịta nke oge a na ndị ozi na-ahụzi anya nwere ogologo oge niile nke ndị ọrụ na ndị ọrụ ha. ICQ enweghị ike ịkwa isi banyere ya. Ya mere, iji chọpụta akụkọ ihe mere eme na onye ọzọ, ị ga-achọ ịbanye na ebe nchekwa kọmputa ahụ. Ichekwa akụkọ ihe mere eme nke ICQ na ndị ozi na-ezigara ya na-echekwa akụkọ akụkọ nke kọmputa na onye ọrụ.
Esi lelee ICQ maka inviz
Taa, ICQ na-esiwanyewanye na-ewu ewu, ọ nwekwara ọtụtụ n'ime otu atụmatụ ahụ ndị ọzọ na-ahụ maka ngwa ngwa. Otu n'ime ha enweghị ike ịchọta. Nke a pụtara na onye ahụ ga-enwe ICQ, ma ndị ọzọ agaghị ahụ ya na ntanetị. Maka ha, ọ ga - adị ka à ga - asị na ICQ anaghị arụ ọrụ maka ya.